Izimoto zokuqala, ezathola uphawu lwe-Actros ngaphansi kwesiphequluli, iMercedes-Benz yaqala ukukhiqiza eminyakeni eyishumi edlule yekhulu lokugcina - ngo-1996. Izimoto azizange ziphumelele kakhulu, zazivame ukwehla, ngakho zathengisa kahle. Esizukulwaneni esilandelayo, ngo-2003, onjiniyela baqaphela ukukhubazeka, imisebenzi eyongeziwe, i-ergonomics ebuyekeziwe, futhi imoto entsha nezinhlamvu ezijwayelekile zavela emgqeni womhlangano.
I-tractor unit yalesi simodeli yayine injini enamandla kakhulu, amabhuloho athuthukisiwe kanye nokumiswa, ama-sun loungers full-back behind the seats in the cockpit kanye nezinye izixazululo ezintsha. Kakade ngo-2004 wathola isihloko esithi "Iloli Yonyaka". Imodeli ikhulise abantu abathandayo, ikhishwa futhi kuze kube yilolu suku, ngakho-ke imoto ephethe igama eliqhoshayo iMersedes-Benz Actros, liyabonakala namuhla emigwaqweni yaseRussia.
Njengamaloli amaningi asekhaya, iJalimane inezinhlelo eziningana zokuguqulwa. Ekhanyayo futhi ejwayele wonke umuntu yi-trekta emibili-esheshayo ene-axle drive yangemuva. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlobonhlobo ezilukhuni, ezingavamile ezinkampeni ezintathu. Futhi imishini ikhiqizwa ngepulatifomu, lapho ungafaka khona noma yikuphi umzimba oyifunayo, kungakhathaliseki ukuthi kuyisiqandisisi noma i-dumper.
Amafomula amafomu ahlukile. I-chassis, i-triaxial version ye-6 x 2 noma i-biaxial version ye-4 x 2 ihlongozwayo. Kuzo zombili izinhlobonhlobo, i-axis eyodwa kuphela iholayo. Amatrakta anenkululeko enkulu. Ikhasimende likwazi ngisho ukukhetha itektala emibili-axile nge-four-wheel drive (4 x 4). Ukuhluka okuyi-4 x 2 kubuye kuvamile. Imishini e-axis amathathu ingaqhutshwa ku-axis eyodwa (6 x 2) noma 2 (6 x 4).
Futhi, i-Mercedes-Benz Actros inehlukile phakathi kwesisindo: kusuka kumathani angu-18 kuya ku-35. Kulesi simo, amanani okuqala enombolo yesimodeli, kungakhathaliseki ukuthi ukucushwa, kubonisa ngokucacile ukugcwele okugcwele. Isibonelo, imodeli ye-1841 inesisindo esiphelele samathani angu-18. Izici zobuchwepheshe zaleli trekta zizokwenza kube lula ukuthwala amathayili anesisindo esingaphezu kwamathani ayi-10.
Njengamanye izimoto zangaphandle ezisetshenziselwa imigwaqo yasekhaya, "i-Mercedes" ibucayi kakhulu emgqeni wendwangu, uphethiloli, akukhuthazwa ukudlulisa ukuhlolwa kwezinsizakalo, uma imoto ingaphansi kwewaranti, ikhwalithi yesiteshi senkonzo ibaluleke kakhulu. Umkhiqizi uncoma ukusebenzisa izesekeli zangempela kuphela. Kodwa uzozwa nganoma imuphi imoto engenisiwe, hhayi kuphela nge-Actced Mercedes-Benz Actros. Kufanele kuqaphele ukuthi le mishini ingabizwa ngokuthi i-flagships ngokuphepha ngemininingwane yobuchwepheshe. Isibonelo, ukukhiya okuphakathi, izibuko zikagesi nezinye izikhundla sezivele zifakwe ekucwangcisweni okuyisisekelo komodeli, kuyilapho abanye abancintisana ngezinye izikhathi bengenayo lezinketho ngisho nasezinguqulweni zokunethezeka.
Izici ezikhethekile zomshini zihlanganisa i-wiring ekhethekile, kanye nama-terminals okusiza abakhi bomzimba ukuba bakhonze imishini yabo ku-chassis. Ungakwazi futhi ukuphawula ukuthi kukhona ama-alamu akhethekile, okusebenza ngawo omunye umshini.
Futhi amagama ambalwa mayelana nezici ze-Mercedes-Benz Actros. Izici zayo zilungiswa ukuze ukuphuma komcibisholo endaweni yokubomvu endaweni, ngokuphambene nalokho, kunciphise umsindo, kunokuba ukwanda, njengoba kutholakala eminye imishini eminingi. Ngakho-ke, abathuthukisi abaphakamisi kulokhu kuqondiswa kuphela ngokuzwa. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa okuvamile kwendawo ebomvu kugcwele izinkinga kanye nokulungiswa okungewona iwaranti. Imingcele ye injini, ngendlela, idinga ukwehla okubushelelezi kwamagesi, hhayi kusukela ngo-5 kuya ku-1. Umshini ngeke nje uvumele. Ukushintsha okunjalo kungaholela ekulungiseni okungewona iwaranti.
Kuzo zonke izici zemoto kungabikwa futhi kuphathwa. Ngesikhathi esifanayo, kufanele kuqondwe ukuthi, ngakolunye uhlangothi, ukulawulwa kwe-Mercedes-Benz Actros 1841 (ugandaganda ohlangothini ababili) akuyona inkimbinkimbi kunemoto evamile, kodwa ukungazi ukuhlakanipha okuthile kungaholela ekuhlulekeni kwezinhlelo ngabanye.
Isibonelo, iphutha elivame kakhulu lomshayeli lithembele kwisibambo sebhodi legiya ngenkathi ushayela noma usebenzisa amandla amakhulu uma ushintsha. Ku-KamAZ lokhu kulandelana kwezinto, kodwa eMercedes lokhu ukwelashwa kungahle kuphulwe. Futhi lokhu kuzoholela ekushintsheni okuphelele kwendawo yokuhlola, ngoba, ngokungafani nama-model of competitors, amaJalimane anakho ukuthuthukiswa asetshenziswe lapha, ngaphezu kwalokho okukhethwa kukho okubili - okuzenzekelayo kanye nobhukwana, kusekhona izikhundla eziphakathi.
I-Euro Truck Simulator
I-Mercedes-Benz Actros nayo yaphawulwa kulo mdlalo odumile kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, njengamanye ama-simulators wekhompiyutha, imininingwane yomshini, ingaphakathi, imvelo itholakala kakhulu. Futhi uma ucabanga ukuthi inguqulo yesibili yale midlalo yekhompyutha, lapho kuzoba khona amathuba okulungisa okungeziwe, akuyona indlela eya ngqo - abadlali ngeke babe nesithukuthezi ngokuqinisekile.
Kufanele kuthiwe ukuthi izinga lomdwebo lidlulisela ngokuphelele zonke izinhlobo zezingozi, kuze kube yilezi zensimbi ezigobile. Futhi uma u-zazevalis futhi "uwanga" uhlobo oluthile lwesithiyo esingenalutho, ngenxa yokulahlekelwa isikhanyiso kanye nengxenye yehood, kuzodingeka ulibeke esiteshini sezinsiza esiseduze. Noma kunjalo, ngeke sikwazi ukudalula zonke izinkohliso, ngaphandle kwalokho ngeke kube mnandi ukudlala kamuva. Vele uqaphele ukuthi ukuthandwa kwabathuthukisi bokuqala begeyimu, kanye nabantu abathakazelayo bangezela kuso imfashini entsha, amathrekhi futhi, ngokusho kwesiko, izinketho zombala. Isibonelo, ezinye zokulungiswa kuzokuvumela ukuthi usebenze isevisi ye-DHL.
Ukubuyekezwa kwezimoto ze-Mercedes-Benz Actros, okwakhiqizwa ngaphambi kuka-2003, bekuvame ukungalungi ngenxa yokuphazamiseka okuphindaphindiwe noma ukushintshwa kwezingxenye. Kodwa i-bulkhead ephelele, esikhundleni sokubuyiselwa okuyingxenye yesimodeli, ngo-2003 yacabangela iningi lezifiso zabasebenzisi. Futhi mayelana nezimoto ezakhiwe emva kuka-2003, kunombono wokuthi akulula kakhulu ukuphatha iloli elinjalo kunemoto evamile. Ungabona futhi ukuthi kuma-Actros anamuhla kunezinzwa ezingamakhulu eziningana ezilandelela imingcele ehlukene yemoto kanye nesitayela sokuhamba, isixwayiso kusengaphambili ngezinkinga ezikhona - futhi isimiso esithi "sixwayiswe - sisho ukuthi sihlomile" asikhanjisiwe.
Ekuphetheni, umfanekiso omncane wokuthi ungasebenzisa kanjani iloli evamile. I-Chassis Mercedes-Benz Actros 2542 enezintambo ezine-6 x 4, ukuhlakanipha okuncane, kanye nesici esivele sishiwo ngokubeka i-wiring - futhi esikhundleni semoto sithola isitolo (noma ngisho nendlu) ngamasondo.
Ngendlela, izimoto ezinjalo zingathengwa eMoscow. Kunezinketho ezingu-4 (umehluko entengo nasendaweni yangaphakathi). Ngaphandle, lena yileli engavamile, futhi ngaphakathi ekamelweni lehhotela elihloniphekile (elinemibhede engu-6) nayo yonke ikhikhishi ehamba phambili, ewokunethezeka kanye neyendlu yokugezela, ipulazi elifudumele, ifenisha yekhanda lokuqala, njll Ngaphandle kwalokho, kukhona ithuba lokulala - ikamelo lokudlela liqhutshelwa kumamodeli ahlukene. Intengo yalendlu iqala kusuka ku-7000 euro.